Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Cusub ee New Zealand » 3 kiis oo kale oo COVID-19 ah ayaa laga xaqiijiyay New Zealand
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Cusub ee New Zealand • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Raiisel wasaare Jacinda Ardern ayaa sheegtay in natiijooyinka isku xigxiga hidde -sidaha ay xaqiijiyeen inay tahay kala duwanaanshaha Delta ee ku xiran taxanaha genome ee kiisaska ka dillaacay New South Wales ee Australia.
Kiisaska bulshada NZ ee COVID-19 illaa 10.
Kordhinta tirada kiisaska bulshada ayaa dhalisay xannibaadii labaad ee waddanka oo dhan.
Kalkaaliye caafimaad oo si buuxda loo tallaaley ee Auckland ayaa ka mid ah dadka laga helay COVID-19.
Tirada guud ee kiisaska bulshada New Zealand ee coronavirus waxay kor u kacday 10 Arbacadii, ka dib markii saddex kiis oo Delta ah oo COVID-19 ah la xaqiijiyay maanta. Kiisaska cusub waxaa ka mid ah kalkaaliso si buuxda loo tallaaley oo ka timid isbitaalka Auckland.
Sagaal ka mid ah kiisaskan ayaa lala xiriiriyay kiisas kale oo beeleed oo keenay in qofka labaad ee qaranka ah xiritaanka heerka sare laga bilaabo Talaadada saqda dhexe Kiiska haray ayaa lala xiriiriyay xadka, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka.
Saddexda kiis ee cusub, oo dhammaantood ku jira Auckland, waa nin 20 -jirkiisa ah oo lammaane u ah kiis la yaqaan, haweeney 60 -jir ah oo xiriir la leh xadka, iyo haweeney 20 -jirkeeda ah oo xiriir la leh kiis kale oo la soo sheegay goor hore Arbacadii.
Goobaha dheeraadka ah ee xiisaha leh ee la aqoonsaday ayaa lagu daray mareegaha wasaaradda caafimaadka, oo ay ku jiraan casino, Avondale College, dhowr suuq -weyneedka Auckland, baararka iyo kafateeriyada, kuwaas oo si tartiib -tartiib ah loo cusbooneysiin doono marka la aqoonsado meelaha danta laga leeyahay.
Xiritaanka Heerka Alert 4, meheradaha iyo iskuulada way xiran yihiin marka laga reebo kuwa daruuriga ah sida suuqyada waaweyn iyo saldhigyada adeegga.